Amasayithi we-Chinese Online Casino - Amakhodi Amabhonasi E-inthanethi Ase-inthanethi
(643 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
IPeople's Republic of China ingelinye lamazwe anamandla futhi athuthukile ngokomnotho emhlabeni, i-giant yezimboni, iparele lezokuvakasha, kuleli zwe lesithathu ngobukhulu emhlabeni, yonke imikhakha yebhizinisi, kufaka phakathi imboni yokugembula, ithuthukiswe kahle .
AmaShayina aziwa ngokuzikhandla nangokusebenza kwawo kahle, kepha esinye isici salaba bantu ukuthanda umdlalo. Ukugembula eChina kwavela ezinkulungwaneni eziningi zeminyaka edlule futhi kuhlobene kakhulu namasiko nomlando wezwe. Akumangalisi ukuthi abakhiqizi abadume kakhulu bokuqukethwe kwamageyimu banakho phakathi kwentuthuko yabo, okuthiwa, imidlalo enezindaba zase-Asia, ezisebenzisa izimpawu nezimpawu zesiko lasempumalanga, kufaka phakathi isiShayina. Ngaphezu kwalokho, kunemidlalo eminingi yase-Asia njengenye indlela yamathebula wakudala nemidlalo yamakhadi: iSic Bo, Mahjong, i-Chinese poker (amakhadi ayi-13), i-fan-tan, njll.
Uthando lwamaShayina ukugembula futhi ngokuzithokozisa ukusebenzisa isikhathi sabo emahholo okudlala.
Yimiphi imithetho yebhizinisi lokugembula ensimini yezwe elikhulu elinabantu abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu-1? Imiphi imithetho elawula le mboni?
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zakwa-Chinese Online Casino
Imithetho yaseChina yokugembula nezindawo zokudlala
Ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili, isikhungo sokugembula eChina kwakuyiShanghai. Kusukela lapho, inkathi kanye nohulumeni wezwe sekuguqukile, kube nezinguquko kubunikazi bezindawo zamakholoni zePRC - futhi kuze kube manje ukuphela kwendawo yemidlalo lapho cishe yonke imboni yezemidlalo yezwe igxile khona yidolobha IMacau (ikoloni langaphambili lasePortugal, kusukela ngo-1999 yaba yingxenye yePRC, idolobha elisogwini loSouth China Sea). I-East Monte Carlo, iLas Vegas yesibili - ngokushesha nje lapho ingabizwanga leli kona elimibalabala lentokozo, lapho amaShayina anethuba lokuqeda ukoma kwawo lo mdlalo, futhi izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba zizokujabulela ukungenisa izihambi kwabantu base-Asiya. Leli dolobha selivele likwazile kaningana ukudlula eLas Vegas ngokwenzuzo yebhizinisi lokugembula.
EMacau, kusebenza amakhasino angaphezu kwama-30 anama-classic desktop nemidlalo yamakhadi, imishini ye-slot. Futhi eMacau kunekhasino enkulu kunazo zonke emhlabeni - iVenetian Macau. Edolobheni konke kuhlelwe ngendlela engcono kakhulu yezivakashi, kunamahhotela amaningi namahhotela, izindawo zokudlela nemigoqo, izitolo namakilabhu okudansa anikela ngezinhlelo ezahlukahlukene zokuzijabulisa.
Kusukela ku-2002, indawo ye-Macau nayo ivunyelwe ukuvula amakhansela kubantu bezinye izizwe, okwakudonsela ukunakwa okuningi kubatshali bevela emhlabeni wonke.
Futhi ensimini yeChina, ngokusemthethweni isebenza ama-lottery ahlukahlukene, iMacau neHong Kong bavunyelwe ukugembula emidlalweni yamahhashi.
Amaqiniso anentshisekelo mayelana nomkhakha wokugembula eChina
Isiko eChina, impela, lihlukile kunelaseYurophu, futhi kukhona okuhlukile kulo, yize ngemuva kokufika kwamakhasino angaphandle (ikakhulukazi aseMelika), isimo jikelele kanye nemithetho eqinile eMacau ithambe kakhulu. Ngokuvamile, isivakashi sekhasino esivela kunoma yiliphi izwe sizozizwa sikhululeke kakhulu. Kepha akufanele sikhohlwe ngemithetho, ngokwesibonelo, cishe ngaso sonke isikhathi kuyadingeka ukulandela ikhodi yokugqoka, hhayi ukungqubuzana nonogada, ukuphatha ikhadi lobunikazi, ngoba abantu abangaphezu kweminyaka engu-18 kuphela abavunyelwe ekhasino, njll. .
Kuyathakazelisa ukuthi ekhasino yaseChina akuvunyelwe ukudlala izikhulu zasendaweni, futhi futhi awukwazi ukuthatha amakhamera neminye imishini emikhulu. Futhi yonke eminye imithetho ejwayelekile iyafana naleyo esebenza emhlabeni jikelele.
Esinye isici esithandekayo sebhizinisi lokugembula laseChina yikhasino elintantayo. Amahholo okugembula atholakala emikhunjini futhi avulekele bonke labo baseChina abangakwazi ukuvakashela iMacau. Abadlali bagibela umkhumbi eHong Kong bese bethatha uhambo lokuya emanzini angathathi hlangothi, lapho, ngaphandle kokuphula umthetho, bengagembula ngokuphepha.
Ukuzuza komkhakha wokugembula eChina
IChina isesikhundleni esiphambili emhlabeni ngokwenzuzo yomkhakha wezemidlalo, iqhudelana njalo ngendawo eyi-1 ne-United States. Yize ukweqa okungapheli kwenzuzo ehlotshaniswa nomkhankaso kahulumeni wokulwa nenkohlakalo, ukuphuma kwabadlali abakhulu abavela eMacau, hhayi isifiso seziphathimandla ukukhulisa isibalo sezindawo zemidlalo kuleli kanye nokwenza amakhasino aku-inthanethi ngokusemthethweni, inzuzo ngokugembula eChina amashumi ezigidigidi zamadola njalo ngonyaka futhi kufinyelela ngaphezu kuka-50% wemali engenayo kwisabelomali sezwe.
Futhi into ebalulekile yemali engenayo ephelele evela embonini yokugembula isabelo esitholwe ngabathuthukisi bemidlalo yeselula eChina. Imali engenayo yonjiniyela isivele idlulile ku- $ 5.5 billion, futhi leli phuzu lingakhuphuka ngo-2019 laya ku- $ 11-12 billion.
Ngaphezu kwalokho, e-China, inkomba ethuthuke kakhulu yokugembula, njenge-e-sports. Izwe linohlelo lombuso lokuthuthukisa ezemidlalo e-e kanye nokwesekwa kwabadlali, minyaka yonke abathatha imiklomelo emiqhudelwaneni yamazwe omhlaba. Ngaphandle kokuthi ukuthengiswa okusemthethweni kwesoftware ye-e-sports kuvinjelwe, izitudiyo zemidlalo zaseChina zingabahlinzeki ngentuthuko ehlakaniphile yezinkampani zangaphandle. Ukusebenza kumgomo wokukhishwa kwabasebenzi, abahlelo baseChina bathola imali enkulu.
I-Casino e-China e-China
Kumele kuqashelwe ukuthi ukugembula online eChina akuvunyelwe futhi kucishe kubhujiswe ngokuphelele. Uhulumeni wezwe ulandela inqubomgomo eqinile evimbela noma yikuphi ukugembula okuku-inthanethi. Kukhona umzabalazo oqhubekayo ngisho nalawo masayithi ahlinzeka ngokungaqondile imininingwane mayelana nezindawo zokudlala.
Vele, amaShayina avakashela amakhasino ahlukahlukene akwamanye amazwe aku-inthanethi, opharetha bawo, ngokwazi izifiso zezakhamizi zaseChina zokugembula, ahlinzeka ngezinsizakalo zawo ngolimi lwawo Kepha eChina, imisebenzi yezikhungo ezinjalo ijeziswa ngokuqinile ngumthetho.
Isizathu esikhulu sokuthi le ndlela yokugembula ingathuthuki, namathemba okuvela emthunzini awasikhulu - lokhu ukungabi khona kwezidingo zezomnotho zezwe kule ngxenye yebhizinisi. Uma isimo siguquka, futhi imali engenayo evela kumakhasino omhlaba eMacau izokwehla ngokushesha, kungenzeka ukuthi iziphathimandla zaseChina zizocubungula kabusha isimo sabo sengqondo engxenyeni eku-inthanethi.
Ikusasa lomkhakha wezokugembula waseChina
Ngo-2015, iMacau yaqopha ukwehla kwerekhodi ezithelweni eminyakeni embalwa edlule. Ama-rollers amaningi aphezulu ashiye indawo yomdlalo, futhi ukungena kwabadlali abavela phesheya kwehle kakhulu, ngenxa yokuqiniswa kwemithetho yokuvakashela iMacau. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, imithetho yokuthola ama-visa isishintshile, izimo zokusebenza kwabasebenza ngama-junket seziba nzima kakhulu, njll. Izinyathelo ezinjalo zikahulumeni zivuse imibhikisho evela kubamele indawo yomdlalo iMacau.
Kepha ochwepheshe bathi kulo nyaka kuzoba ngowokugcina ongenanzuzo embonini yezemidlalo yaseChina. Maduze nje isimo sizosimama, umkhankaso wokulwa nenkohlakalo uzoma, futhi uhulumeni, oqonda ukubaluleka kwale mboni ezweni, uzokwakha izimo ezikahle zokuthuthukisa amabhizinisi.
Emhlabeni amaShayina aziwa njengesizwe esisebenza kanzima kakhulu. Kepha kukhona lesi sizwe esinye isici esingabizwa ngokuphepha ngokuthi uthando. Lolu uthando olumangalisayo ngokugembula. AmaShayina angajwayelekile ayaziphuca injabulo yokukitaza izinzwa zakho, ukubheja kunoma yimuphi umdlalo noma ukuthenga amathikithi ambalwa e-lottery. E-China, ukugembula, isibonelo, i-mahjong kungenzeka kunoma yikuphi, noma ngabe akuyona iholide.
Ukulutha okufanayo eChina kunomlando omude kakhulu futhi onezigigaba, okugcine imibhalo eminingi ethokozisayo. Amarekhodi okuqala okugembula kulelizwe enziwa ngesikhathi sokubusa kobukhosi bokuqala, okusho ukuthi okungenani aneminyaka engama-4000. I-China ayinikezi umhlaba kuphela ukuqhuma kwezibhamu, amaphepha nezinye izinto ezisetshenziswayo, kodwa nemisebenzi efana nelotto, i-mahjong noma iPai Gow.
Kusukela ngekhulu lesikhombisa AD, eChina kwaphela amakhulu eminyaka enza izinhlangano eziningi, ezavula izikhungo zokugembula. Abantu abacebile baba, izindlu zokugembula zavela ngokwengeziwe. Ngekhulu leshumi nane kuya kweleshumi nesikhombisa, leli bhizinisi lalithathwa njengelihloniphekile futhi laletha inzuzo enkulu. Ngokuvamile kwakuhilela abameleli bomhlaba wobugebengu ababambisana nezikhulu ezikhohlakele.
Engxenyeni yesibili yeshumi nesishiyagalolunye - ekuqaleni kwamashumi amabili eminyaka isikhungo sokugembula eChina kwakuyiShanghai. Iheha abadlali abavela kuzo zonke izingxenye zezwe elibanzi. Noma kunjalo, bekukhona amakhasino amakhulu, lapho ungenza khona ukubheja emidlalweni eminingi yasendaweni naphesheya kwezilwandle. Lezi zikhungo beziseMvumelwaneni yaseFrance eShanghai, naseShanghai International Settlement.
Ngo-1847, uhulumeni wasePutukezi wakwenza kwaba semthethweni ukugembula eMacau. Kamuva, ngenxa yempi yombango yaseChina yabusa embusweni wamaKhomanisi, owaqeda wonke amakhasino ezweni, kepha eMacau, okusabusa iPortugal, baqhubeka nokusebenza.
Ngenkathi ngo-1999, iMacao, ingenzekanga yayiyingxenye yePeople's Republic of China, izinguquko emthethweni ophathelene nokugembula. Kusukela ngo-2002, lapha kuvunyelwe ukuvula abangaphandle kwamakhasino. Njengamanje, kunamakhasino angaphezu kwamashumi amathathu eMacau, ahlinzeka ngemidlalo eminingi, futhi ukuphela kwendawo eChina lapho amakhasino ayikhaya elisemthethweni khona. Ku-2010, iMacau yavakashelwa ngabantu ababalelwa ezigidini ezingamashumi amabili nanhlanu, futhi abangaphezu kwengxenye yabo badlala ekhasino.
Cishe kulo lonke elaseChina kukhona ilotho esemthethweni eMacao naseHong Kong, ungabheja emijahweni yamahhashi. AmaShayina amaningi athunyelwa ohambweni lwesikhashana emikhunjini, ukuthi phakathi nalezi zikebhe zokuyodlala ekhasino elisebenza ebhodini.
, kepha ukuqonda isizathu sothando olunjalo lwamaShayina ukugembula, akwanele ukuphendukela emlandweni. Ukutadishwa kwalo mbuzo kudinga ukuhlolwa kwesiko lamaShayina. Kufanele kusho ngasikhathi sinye ukuthi asikhulumi ngokukhuthazwa kweziphathimandla. Abavelele kakhulu kulaba bantu abawamukelanga lo mdlalo ngemali, beyithatha njengokuchitha isikhathi nokusongela ukuhleleka komphakathi. Ngakho-ke, ababusi abebelukhuni ngokwedlulele ukulawula umbuso omkhulu, bebehlala njalo bezama ukulawula ukugembula kanti futhi bavame ukuvimbela.
Imibono yefilosofi yaseChina yakhiwa ngaphansi kwethonya leConfucianism, Taoism kanye neBuddhism. Kuzo kunakwa okuningi kukhokhelwa umthelela wamandla aphezulu. Abadlali baseChina ngezinga elikhulu kunalabo abasezweni laseNtshonalanga bakholelwa ekudalelweni nasenhlanhleni. Kubo, izinhlobonhlobo ezibaluleke kakhulu zezintelezi, indawo yezinto (khumbula uFeng Shui), usuku nenombolo (ukubhula ngezinombolo okudumile). Konke lokhu kungadala inkohliso yokulawula isimo, okuvame ukuholela ekubeni umlutha wokugembula.
Ngendlela, ukuncika ekugembuleni emphakathini waseChina akuvamisile ukubhekwa njengesifo sengqondo. Abantu abanjalo babhekwa njengababi ngokombono wokuziphatha, futhi bambalwa abantu abazobazwela, njengoba kuvamile emazweni aseNtshonalanga. UConfucius wathi “indoda enesizotha ayidlali ngemali.”
Kuyafaneleka futhi ukubheka izinto zomphakathi ezinomthelela omkhulu ku-psychology yabantu baseChina. Eminyakeni yamuva nje, izigidi zabantu kuleli zwe zinqoba indlela enzima esuka ebuphofwini yaya endaweni ezinzile, ngisho nokuchuma. Njengoba wazi, izolo umuntu ompofu, okwazile ukuceba ngokushesha, uvame kakhulu ukukhombisa umhlaba ukuthi angaphonsa imali ngakwesokunxele nangakwesobunxele. Kungakho amaShayina amaningi ephikisana ngokuthi lo mdlalo udlalwa ngenjabulo.
Ungakhohlwa ukuthi ukungabikho kwamakhasino kwezinye izindawo akusho ukuthi abantu bakulesi sifunda abadlaleli imali. Isibonelo, i-mahjong idlalwa ngamanani wangempela ezweni lonke amakhulu amaningi eminyaka. Lo mdlalo uthathwa njengomvocavoci omkhulu womqondo, owusizo kubantu abadala, nokuzijabulisa okuhle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zamaqembu. Emdlalweni wakhe, ngisho nasemishadweni nasemngcwabeni.
Umkhankaso wokulwa nokugembula
Yize ukugembula eMacau kukhula ngokushesha, uhulumeni waseChina akawusekeli umqondo wokuxazulula amakhasino kulo lonke izwe. Ngaphezu kwalokho, ivala ngamandla ikhasino ekhona online. Ku-2010, imisebenzi eyekiwe yeziningi zalezi zikhungo, futhi iziphathimandla zabamba abaqhubi bezokugembula kwi-inthanethi cishe ama-dollar ayizigidi eziyikhulu.
Kodwa-ke, uhulumeni akazange ayeke futhi athathe izindawo ezinikezela ulwazi mayelana namakhasino ase-intanethi futhi zinikeze izixhumanisi kubo. Le nqubomgomo ayishiyi abalandeli baseChina bezokuzijabulisa okunjalo bengelona ithuba, futhi le mboni ilicekele phansi izwe. Ngisho nabasebenza kwamanye amazwe ababeki engcupheni yokuhlinzeka ngezinsizakalo zabo kuzakhamizi zaseChina.
Noma kunjalo, ukugembula eChina kusukela esikhathini esidlule, futhi akunakwenzeka ukuthi othile noma into ekwazi ukukhipha amaShayina ukushiya lo mdlalo wokuzilibazisa.
Amakhasino aseChina - futhi kungathandeka futhi kugwazwe
Ingabe ikhona ikhasino eChina? Ukukhuluma ngokujwayelekile, izikhungo zokugembula lapho. Kepha empeleni, basebenza kuphela endaweni eyodwa yokugembula - iMacao. Ezweni lonke elibanzi kunqatshelwe cishe konke ukugembula. Kwenzeka kanjani ukuthi ukugembula kwamaShayina kuncishwe imisebenzi yakhe yokuzilibazisa? Funda!
Umlando wokugembula eChina;
Imithetho ngokugembula - ukugembula akukho emthethweni kuyo yonke indawo ngaphandle kwaseMacao;
IMacau - indawo yokugembula egunyaziwe eChina. Imbangi enamandla ngisho neLas Vegas;
Amakhasino aseChina emanzini noma kumakhasino "ezintantayo";
I-casino e-Inthanethi ku-PRC:
Isiphetho lapho futhi nidlalaphi i-China?
mahjong uhambe emigwaqweni - le midlalo ayivunyelwe;
amakhasinantsantsi athambileyo, esuka emanzini angathathi hlangothi.
Umlando wokugembula eChina
Bathi uthando lwabakhileyo eMbusweni ophakathi nokugembula lwavela ngaphambili kakhulu kunezinye izizwe eziningi. Ukukhulunywa kwayo okokuqala kusukela enkulungwaneni yesibili yeminyaka ngaphambi kukaKhristu.
Izindlu zokugembula zaseChina zaqala ukuvuleka ngaphambi kwanoma ngubani omunye umuntu - ngisho nangekhulu le-VII! Ngisho namaNtaliyane aqala ukuhlela ikhasino kuphela ngekhulu le-XII, kanye naseFrance, ngisho nangemva kwalokho.
Umlando wonke waseChina usondelene kakhulu nokugembula. Izwe licebile, lapho umnotho uthuthuka kangcono, izikhungo zokugembula ezivuleke ngokwengeziwe. Kodwa kwenzeka ukuthi kaningi babe ngaphansi kwephiko le-mafia, futhi bamlethela inzuzo enkulu.
Isikhathi eside, kuze kube maphakathi nekhulu lamashumi amabili, inhlokodolobha yezwe lemidlalo yokugembula yayiyiShanghai. Lapha, zonke izindawo zakhiwa amakhasino. Sisebenze isikhungo esihle, sikulungele ukukhonza izivakashi ngokwasebukhosini. Badlale yonke imidlalo ebisaziwa e-Asia, Europe naseMelika kuphela.
Okunye ukugembula kuyisiqhingi saseHong Kong. Sidlale lapha ezitaladini, ezinkantolo, ezikhungweni ezikhethekile zokugembula nakuwo wonke amakhona.
Kwangakubo ukugembula kwakhula ngenkuthalo eMacau, eyangaphambili kwaze kwaba yi-1999 ikoloni lasePortugal.
Kodwa-ke, njengokugeleza kwamahhala kokugembula namakhasino, kanye nokuqinisa ithonya lezinhlangano zobugebengu, ngokungafani nezintshisekelo zombuso. Ngakho-ke, ngokungena kwamandla kwamaKhomanisi cishe konke ukugembula kwakungavunyelwe.
Imithetho yaseChina yokugembula
Umthetho ovimbela amakhasino nokugembula, wamukelwa ngo-1949. Futhi usasebenza namanje. Okuhlukile okuncane kwenzelwa ababhuki. Bavunyelwe ukubheja emjahweni wamahhashi nakumidlalo yebhola likanobhutshuzwayo.
Okunye okuhlukile ilotto. E-China, bonke bangabezwe lonke. Opharetha abazimele imisebenzi enjalo ayivunyelwe nakancane. Kulokhu okutholwe ku-National Lottery, kubhekiswe ezinhlelweni zokwakha nezenhlalo.
Usho kanjani iMacao? Yebo Yebo. Lokhu okunye okuhlukile okufakazela umthetho. Kusukela indawo yayo lapho amaPutukezi evunyelwe amakhasino, khona-ke ukubuyiselwa kwensimu esifubeni saseChina kwathathwa isinqumo sokushiya, futhi kuthuthukiswe le ndawo.
Izindawo zokudlala zomthetho eChina
Eqinisweni, iMacau ukuphela kwendawo yokudlala esemthethweni eChina. Amakhasino asemthethweni asePutukezi ngo-1847. Futhi amaShayina anikeze imvume esemthethweni ngo-2002.
Futhi njengoba le ndawo ingukuphela kwendawo lapho ungathwebula khona amakhuphoni kubadlali bokugembula, kufaka phakathi nabokufika abacebile kakhulu, i-China rasstaralsya yodumo. Abaningi abangamavila abasebenza ngaphansi kokugembula kwamaPutukezi bachuma. Eminyakeni eyishumi nje kuphela, inqwaba yezindawo zokunethezeka, ezishaya wonke amarekhodi.
Namuhla iMacau inqoba ngokushesha isihloko senhlokodolobha yokugembula eLas Vegas. Idolobhana lesigamu livakashelwa ngamashumi ezigidi zezivakashi minyaka yonke. Abezizwe bamukelwa ngezandla ezifudumele futhi banikela nge-1 1000 nangendlela yobudedengu yokugcwalisa umgcinimafa kahulumeni.
Kepha izakhamizi zaseChina ukufika eMacau akulula. Kuyadingeka ukuthi uvikele endaweni yokuhlola eGongbei, ube nenani elithile, futhi isinqumo akufanele sibe semthethweni. Izikhulu zokugembula zivinjelwe ngumthetho, ngakho-ke aziphuli ngengozi imali yomphakathi.
Amakhasino aphefumulayo eChina
Uma amaShayina engakwazi ukuya eMacau, ahlala eyenye inketho - ikhasino elintantayo eHong Kong. Cha, cha, lokhu akuvunyelwe ukudlala enkundleni. Kepha emanzini aphesheya, akukho ukuvinjelwa kwamaShayina okungasebenzi. Futhi kulapho kuqondiswe khona izindwangu ezinhle ezenziwe ngobunono, amalambu e-iridescent. Ukushiya amanzi endawo yaseChina, vakashela umkhumbi ungazitika ngokugembula ubusuku bonke.
Ngendlela, zithandwa kakhulu phakathi kohambo lwesikhashana lwesikhashana lokuhamba kule mikhumbi. Kuvela ukuthi kube nolwandle olumangalisayo ogwini nokugembula.
Leli bhizinisi ngenxa yezikhala zomthetho likhula ngempumelelo enkulu. Imikhumbi eminingi ayibukelwa phansi ku “Titanic” kanokusho. Zingaphezu kwemishini yanamuhla yekhasino ayizimbi kakhulu izikole zaseMacau, amachibi okubhukuda, izinkundla zezemidlalo, izindawo zokudla, amahholo ekhonsathi, amabhayisikobho nokuningi.
Kukhona izikebhe futhi ezilula, ngokwesibonelo, isikebhe esiguquliwe. I-Neroskoshno, kodwa ithikithi lemidlalo yasebusuku elibiza kusuka ku- $ 38.
Amakhasino ase-China e-China
Kungabonakala sengathi amaShayina angasusa uthando lwawo kusuka kumakhasino wangempela alubhekise kokungokoqobo. Kodwa kwakungekho lapho. E-China, kunemithetho eqinile kakhulu evimbela ukwenziwa kwamakhasino aku-inthanethi nanoma yimaphi amasayithi anikeza ukuzijabulisa ngokugembula.
Ukwephula umthetho kwenza izenzo zibe zimbi. Awukwazi ukukhokha inhlawulo, kepha futhi uhlala ejele.
Ensimini yaseChina kunqatshelwe ukubeka iseva, izinhlelo zokukhokha, ezixhunywe ekusebenzeni kwekhasino online. uhulumeni wenza konke okusemandleni ukuhlunga izinsiza zomhlaba. Hhayi kuphela amakhasino wesayithi avinjiwe nezitolo zokubheja, kodwa futhi namakamelo e-poker, kanye nezinsiza ezikhangisa enye yalezi zingosi.
Kunolwazi olunzima lwabantu bamakhompyutha abazama ukunqanda ukuvinjelwa, ngokuguqula ngesandla i-IP ibe yi-IP eChina elinye izwe. Kepha kulesi sigaba sokuvikelwa okubonakalayo kweChina kuhlakaniphe kangangoba kuthola la maqhinga. Ngisho nakulokho okubonakala sengathi kuyiprank okuhehwa yisikweletu sobugebengu.
Isifinyezo: kuphi ukugembula eChina
Uma usufuna ngempela ukudlala kunoma yikuphi ukugembula, ungakhetha okunye okukhethwa kukho:
Akufanelekile ukubeka ingozi futhi uxhumane nezindawo zokudlala zeShayina ngokuzenzekelayo, futhi ulwe nabo ngokujulile.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zakwa-Chinese Online Casino
3 I-China nezokuGembula
4 Amakhasino aseChina - futhi kungathandeka futhi kugwazwe
4.0.1 Umlando wokugembula eChina
4.0.2 Imithetho yaseChina yokugembula
4.1 Izindawo zokudlala zomthetho eChina
4.1.1 Amakhasino aphefumulayo eChina
4.1.2 Amakhasino ase-China e-China
4.1.3 Isifinyezo: kuphi ukugembula eChina
amakhasino intertops zakudala akukho ibhonasi idiphozi